Maxaad dooneysaa in aad ka oggaato kulankii 1-aad ee Kalfadhiga 6-aad ee golaha Shacabka? – Kalfadhi
Maxaad dooneysaa in aad ka oggaato kulankii 1-aad ee Kalfadhiga 6-aad ee golaha Shacabka?
October 19, 2019 October 19, 2019 Hassan Istiila
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, ayaa maanta oo Sabti ah taariikhdana ay ku beegantahay 19 Oct waxaa ay ay kulankoodii 1-aad ee Kalfadhiga 6-aad ee golaha shacabka ay ku yesheen Magaalada Muqdishu.
Kulanka maanta waxaa soo xaadirtay 152 Xildhibaan, waxana Shir Gudominaya Gudomiyaha Golaha Shacabka BJFS Mudane Maxamed Mursal Shekh Cabdiraxman, iyo Guddomiye Ku-xigeenada 1aad iyo labaad.
Kulankan ayaa ka dhacaya Xarunta Villa Hargeysa ee xeyndaabka Madaxtooyada, maadaama xarunta Golaha Shacabka dhowaan dib loo dhisi doono.
Maxaa lagu soo hadal qaaday kulanka?
Hadal jeedinta Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jederaalka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ahaa ajendaha koowaad ee kulanka manta, waxa uu kaga hadlay dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin howlaha ugu muhiimsan ee Golaha horyaala kalfadhigan lixaad ,shuruucda ay Golaha ansixiyeen ee horyaala Golaha Aqalka Sare.
Guddoomiyaha ayaa soo hadal qaaday kala aragti duwanaansho u dhaxeysay labada Aqal ee Baarlamaanka oo hada xal laga gaaray.
Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa sidoo kale waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira dhameystirka dastuurka, dejinta jadwalka dhameystirka Dastuurka.
Sidoo kale Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa loo qeybiyay Akhrinta 2-aad ee sharciga Istaatiistikada ama tira koobka Qaranka, Akhrinta 2-aad ee sharciga furdooyinka, Hindise sharciyeedka Qareenada Soomaaliyeed, Hindise sharciyeedka Nootaayada dadweynaha, Akhrinta 2-aad ee sharciga maamulka Dakhliga, Hindise sharciyeedka dib u eegista shaciga Xisbiyada siyaasadda ee dalka, Qoondada ku noqoshada miisaaniyadda 2019-ka, Akhrinta 2-aad ee sharciga Iibka Qaranka, qeybinta maaliyadeed ee dowladda Federaalka Soomaaliyeed, Warbixinta hantidhowrka ee 2018-KA iyo sidoo kale Xisaab xir maaliyadeedka 2018-KA.
Faah-Faahin: kulankoodii 1-aad ee Kalfadhiga 6-aad oo maanta ka furmay Muqdisho